Dôriana - Wikipedia
Ny Dôriana dia iray amin' ireo vondron' olona (ethnē) lehibe tany Gresy na Grisia fahiny (miaraka amin' ny Akaiana, ny Eôliana, ary ny Iôniana), izay niditra nanafika io tany io avy any avaratra tamin' ny taonjato faha-12 sy faha-11 tal. i J.K. Nizarazara ho fanjanaka mainika maro izy ireo. Araka ny lovantsofina dia avy amin' ny anaran' i Dôrôsy (grika: Δῶρος / Dỗros) razamben' izy ireo, zanak’ i Heleny (grika: Ἕλλην / Héllên), no nahazo ny anarany ny Dôriana, izay nanorim-ponenana tao amin’ ilay faritra noheverin’ ny Dôriana ho tanindrazany tany am-boalohany, dia i Dôrisy (grika: Δωρίς / Dôris).
I Lato, toerana nonenan' ny Dôriana ao amin' ny nosy Kreta
Ny Dôriana dia nanorim-ponenana voalohany tany Sparta, Argôlisy ary Kôrinto, tao amin' ny faritr' i Pelôpônesôsy, ka ny fiverenan' izy ireo tao amin' ity faritra ity, araka ny angano, dia nitovitovy tamin' ny fiverenana ara-pedràn' ny Heraklida, taranak' i Heraklesy. Nanani-bohitra ny Dôriana ary avy eo nibodo an' i Kreta, an' i Dôdekanesa, ny atsimo-andrefan' i Azia Minora, an' i Sisilia ary ny atsimon' ny faritr' i Italia.
Nandrava ny sivilizasiona mikeniana izy ireo ary, tany Sparta sy Kreta, dia nampietry ny olom-peheziny ho toy ny Heilôta (grika: Εἵλωτες / Heílôtes), izay mpanompo nefa tsy andevo azo amidy, izy ireo. Tetsy an-danin' izany, tany amin' ny toeran-kafa dia nisy ny fifangaroana tsikelikely teo amin' ny mpandresy sy ny vahoaka resy.
Niteny tenim-paritra grika antsoina hoe fiteny dôriana (grika: Δωρίδα γλῶσσα / Dorída glỗssa) ny Dôriana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dôriana&oldid=1042362"
Dernière modification le 22 Desambra 2021, à 07:49
Voaova farany tamin'ny 22 Desambra 2021 amin'ny 07:49 ity pejy ity.